Porn ပေါ်တွင်သင်၏ ဦး နှောက် - တူညီသောသုတေသီများမှပိုမိုသောအထောက်အထားများ
သငျသညျရေခဲမုန့်စွဲရနိုင်သလား? ဒီတစ်ခါလည်း, ရှိုးများလေ့လာ
သေချာတာပေါ့, စတီဖင် Colbert ရဲ့ Americone အိပ်မက် အရသာ ဒါကြောင့်ကောင်းသောသင်သိပါကစွဲလမ်းဖွင့်ပေမယ့်ဖြစ်ပါသည်, စွဲလမ်းစေ? Ben နှင့် Jerry, Häagen Dazs, သို့မဟုတ် Blue Bell တို့သည်နီကိုတင်းနှင့်တူသောအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုတွန်းလှန်နိုင်သလော။ Baskin-Robbins-as-crack-house ဟာရယ်စရာကောင်းပုံရပြီး မည်သည့်အစားအစာကိုစွဲလမ်းစေနိုင်ပါတယ်သောစိတ်ကူး သိပ္ပံနည်းကျအသိဆဲအငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျယ်ပြန့်အဖြစ်ဝေးဦးနှောက်ရဲ့ circuitry သက်ဆိုင်ရာအတိုင်း, စကားပြော, အပျော်အပါးကာမဂုဏ်၌မွေ့လျော်သည်။ activation ပုံစံများကိုမကြာခဏအတူတူပင်အကြောင်းကိုကြည့်ပါ။
အခုတော့သစ်ကိုသုတေသနပြုရေခဲမုန့်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများဘုံထဲမှာတခြားအရာတစ်ခုခုဝေမျှစေခြင်းငှါပြသထားတယ်။ သူတို့ ပို. ပို. တပ်မက်သော်လည်းမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, စွဲ, ဒီထက်နည်းအပျော်အပါးခံစားကြရသည်။ ဒီအကြိုးသကျရောဦးနှောက်ဓာတု dopamine ဘို့ဆယ်လူလာ receptors ၏တိကျသောဗားရှင်းတစ်လျှော့ချသိပ်သည်းဆနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်ဆွခံစားရန်စွမ်းရည်ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေမူလျှင်ကြောင့်ပါပဲ။
အခါများစွာသုတေသီများ Kyle အက်စ်ဘာဂါနဲ့အဲရစ် Stice, အော်ရီဂွန်သုတေသနအင်စတီကျုကလေးတွေ '' ဦးနှောက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးနေလျက်ရှိစဉ်တွင်, အောင်ကျွေးလေးတွေ (Häagen Dazs နှင့်ဖွဲ့) အစစ်အမှန်ချောကလက် milkshakes သူတို့တစ်တွေအလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ထုတ်ဝေမယ့်လေ့လာမှုအတွက် အွန်လိုင်း ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကလက်တွေ့အာဟာရ၏အမေရိကန်ဂျာနယ်အသုံးပြုပုံဘာဂါနဲ့ Stice ပထမဦးဆုံးသူတို့အားအပေါငျးတို့သ 151 မြီးကောင်ပေါက်စစ်တမ်းကောက်ယူ ကျန်းမာသော အလေးချိန်, သူတို့ရဲ့မကြာသေးမီစားအလေ့အထများနှင့်ပတ်သက်ပြီးနှင့်မည်မျှသူတို့အချို့သောအစားအစာများကိုအလိုအလျောက်။ သူတို့ကိုတစ်ဦး milkshake တစ်ကာတွန်းဖေါ်ပြခြင်းနေချိန်မှာထိုအခါသူတို့ကအစစ်အမှန်တုန်လှုပ်ခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, တဏှာကိုတိုင်းတာရန်အနေနဲ့ fMRI စက်၌သူတို့ကို scan ဖတ်။
ဒါဟာရေခဲမုန့်စားတဲ့သူတွေရဲ့ ဦး နှောက်ကိုပြောင်းလိုက်သလိုပါပဲ။ “ ဒီအစားအစာတွေကိုစားသုံးခြင်းကအကျိုးကျေးဇူးတွေရစေတယ်။ တစ်ချိန်ကသင်ခံစားခဲ့ရသည့်အပျော်အပါးကိုခံစားရရန်“ ဒါကမင်းကိုပိုစားစေနိုင်တယ်” ဟုဆိုသည်။ “ အရင်ကကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုမင်းအမြဲတမ်းချည်နှောင်ထားနိုင်တယ်။
အရေးကြီးတာကအဲဒီကလေးတွေအဆီဘူး။ ဒါကဦးနှောက်ကိုဘာဂါအဝလွန်ခြင်းအတွက်သတ်မှတ်မတိုင်မီဖြစ်ပျက်အလုပ်ကိုမှာဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်သည်ပြောင်းလဲဆိုလိုသည်။ Hyper-rewarding စားသောအစားအစာများသည် ဦး နှောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဆေးရွက်ကြီးနှင့်အရက်တို့နှင့်တွေ့ရသည့်ပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ..။ ဒါကအစားအသောက်စွဲလမ်းမှုပဲ” ဟုယေးလ်စိတ်ပညာပါရဂူဘွဲ့ယူအက်ရှလေဂေရတ်ကအခိုင်အမာပြောကြားခဲ့သည်။ (fMRI တွင်အစိုင်အခဲရေခဲမုန့်ကိုအစာမကျွေးနိုင်ပါ။ ) သူမအနေဖြင့်အစားအစာစွဲလမ်းမှုသည်“ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘဲ” ဟု ၀ န်ခံခဲ့သည်။ ဆုလာဘ်တိုးမြှင့်ဖို့နှင့်အားနည်းချက်ကလူစွဲဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဘာဂါကမသေချာဘူး “ အစားအစာကစွဲလမ်းတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး။ ငါဆိုသည်မှာစွမ်းအင်သိပ်သည်းသောအစားအစာ၊ သကြားဓာတ်မြင့်မားခြင်းသည်စားသုံးမှုအတွင်းမူးယစ်ဆေးစွဲမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အာရုံကြောဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဟုငါဆိုသည်။ ဒါကြောင့်စွဲလမ်းစေတဲ့ဂုဏ်သတ္တိများရှိတယ်။ "
၎င်းသည်ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲကွာခြားမှုရှိပုံရသည်။ သို့သော်စစ်မှန်သောစွဲလမ်းမှုသည်မြင့်မားသောတပ်မက်မှု၏မျက်နှာတွင်လျော့နည်းသွားသောဆုထက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည်။ ပိုမိုလေ့လာသင်ယူသည်အထိ Super Fudge Chunk ၏ပျော်မွေ့ခြင်းကိုခံစားပါ။
မကြာခဏရေခဲမုန့်စားသုံးမှုအနေနဲ့ရေခဲမုန့်-based milkshake လက်ခံရရှိမှလျှော့ striatal တုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်
ပထမဦးစွာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ ဖေဖေါ်ဝါရီလ 15, 2012Doi: 10.3945 / ajcn.111.027003
နံနက် J ကို Clin Nutr ဧပြီလ 2012 ajcn.027003
Kyle S ကိုဘာဂါ နှင့် အဲရစ် Stice
နောက်ခံသမိုင်း: အလေးချိန်အမြတ်စွမ်းအင်သိပ်သည်းအစားအစာလက်ခံရရှိလျှော့ချဆုလာဘ်-ဒေသ Response မှဦးဆောင်နှင့်တစ်ဦး isocaloric low-စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆအစားအစာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကာစွမ်းအင်သိပ်သည်းတဲ့အစားအစာစားသုံးမှုလျှော့ချ dopamine receptors စေပါတယ်။ ထို့အပွငျ phasic dopamine စုပေါင်းထားတဲ့စွမ်းအင်သိပ်သည်းအစားအစာမကြာခဏစားသုံးမှုကြောင့်အစားအစာကိုလက်ခံရရှိမှ striatal တုံ့ပြန်မှုကိုလျော့ချစေခြင်းငှါအကြံပြုသောအရာအစားအစာထပ်ခါတလဲလဲစားသုံးမှုပြီးနောက်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာလက်ခံရရှိလျှောက်လျော့နည်းဖို့အချက်ပြ။
Objective: ကျနော်တို့အနေနဲ့ရေခဲမုန့်-based milkshake လက်ခံရရှိတုံ့ပြန်မကြာခဏရေခဲမုန့်စားသုံးမှုဆုလာဘ်-related ဦးနှောက်ဒေသများတွင်လျှော့ activation နဲ့ဆက်စပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းသောအယူအဆ (ဥပမာ striatum) စမ်းသပ်ပြီးနှင့် adipose တစ်ရှူးများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်ဤစပ်လျဉ်း၏တိကျသောလေ့လာ ။
ဒီဇိုင်း: ကျန်းမာ-အလေးချိန်မြီးကောင်ပေါက် (n = 151) တစ်ဦး milkshake လက်ခံရရှိစဉ်နှင့်တစ်အရသာမရှိသောဖြေရှင်းချက်လက်ခံရရှိစဉ်အတွင်း fMRI ခံယူ။ ရာခိုင်နှုန်းခန္ဓာကိုယ်အဆီ, အစားအစာစားသုံးမှုကဖော်ပြခဲ့သည်နှင့်အစားအစာတဏှာနှင့်အကြိုက်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
ရလဒ်များ: Milkshake လက်ခံရရှိစေ့စ့စပ်စပ်ပု striatal ဒေသများ activated ဖြစ်သော်လည်း, မကြာခဏရေခဲမုန့်စားသုံးမှုသည်ဤဆုလာဘ်-related ဦးနှောက်ဒေသများတွင် milkshake လက်ခံရရှိဖို့လျှော့တုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ရာခိုင်နှုန်းခန္ဓာကိုယ်အဆီ, စုစုပေါင်းစွမ်းအင်စားသုံးမှု, အဆီနဲ့သကြားကနေစွမ်းအင်၏ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အခြားစွမ်းအင်သိပ်သည်းအစားအစာစားသုံးမှု milkshake လက်ခံရရှိဖို့အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုမှဆက်စပ်ကြဘူး။
ကောက်ချက်: ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုခန္ဓာကိုယ်အဆီလွတ်လပ်သောရေခဲမုန့်များ၏မကြာခဏစားသုံးမှု, မူးယစ်ဆေးစွဲလေ့လာသည့်သည်းခံစိတ် paralleling လူသားများအတွက်ဆုလာဘ်-ဒေသ Response တစ်လျှော့ချရေးနှင့်ပတ်သက်သောကြောင်းဝတ္ထုသက်သေအထောက်အထားသည်။ ဒေတာတွင်အစာစားခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်သင်ယူမှု၏အာရုံခံရှုထောင့်တိကျသောမောင်းစေခြင်းငှါအကြံပြုသောအထူးအစာမှ attenuation ဆုလာဘ်-ဒေသအပေါ်တုံ့ပြန်သည့်အထူးသဖြင့်စွမ်းအင်သိပ်သည်းအစားအစာရလဒ်များကြောင့်စားသုံးမှုဆိုလို။